Microcement: ihe a na-achọsi ike na ụwa nke mgbanwe | Bezzia
Bezzia | 19/06/2022 08:48 | .Chọ Mma, Aghụghọ mma
El ulo bu isi akwara nke odinma anyi, na-eje ozi iji na-ekwe nkwa na anyị na-edo onwe anyị n'okpuru ụkpụrụ nke àgwà ndụ anyị kwesịrị. Ka iwelie ụkpụrụ dị ka ebe obibi, nkasi obi ma ọ bụ aesthetics, ime mgbanwe bụ otu n'ime omume na-enye afọ ojuju. Ọrụ anyị nwere ike ịzụlite n'onwe anyị ma ọ bụrụ na anyị ejiri nlezianya mụọ nhọrọ dị iche iche nke na-achịkwa ahịa ugbu a; dị ka microcement. Ihe na-esiwanye ewu ewu nke guzobe onwe ya dị ka axis na nkà ihe ọmụma N'onwe Gị (mee ya onwe gị).
1 Kedu ihe bụ microcement na ebee ka enwere ike itinye ya?
2 Kedu uru microcement dị
Kedu ihe bụ microcement na ebee ka enwere ike itinye ya?
Mgbe anyị na-ekpebi ime mgbanwe n'otu ma ọ bụ ọtụtụ ọnụ ụlọ nke ụlọ, ọ dị mkpa iji mee nyocha nke ngwaahịa dị iche iche nke anyị nwere n'aka anyị. N'ime ime nke a, n'oge na-adịghị anya anyị na-ahụ onwe anyị kpọmkwem na ndị ntinye: ihe sitere na ciment, resins, additives na mineral pigments nke a na-edozi n'ụzọ zuru ezu. Isiokwu a na-agbanwe ihe niile dị n'ụwa nke imewe ime ụlọ na, ọ bụrụ na anyị etinye ego na microcement dị njikere iji, anyị nwere ike itinye ya n'onwe anyị. iru ọhụrụ ogo nke ịchọ mma mma.
Ọ bụ ezie na ihe ndị ọzọ na-amanye anyị iwere usoro ihe owuwu dị oke ọnụ, microcement na-agbaso ebili mmiri N'onwe Gị. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike mee mgbanwe ahụ n'ime ụlọ nke ọ bụla n'ime ụlọ na-enweghị akụkụ ndị dị ka ego ma ọ bụ oge etinyere megide anyị. Kedu ihe ọzọ, microcement na-adabara n'ụdị elu niile, gụnyere taịlị, taịlị na plasterboard. Ọrụ anyị na-arụ n'ime ụbọchị ole na ole ka anyị wee nwee ọmarịcha oghere, na-eji nhazi na-aga n'ihu ma na-emegharị ya ka ọ masịrị anyị.
Ngwa nke microcement na-ewu ewu karịsịa n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ, n'ihi ikike ya ikpochapụ nkwonkwo n'elu ala na mgbidi iji hapụ ọdịdị nke na-aga n'ihu. Ka o sina dị, ndabere ọ bụla nke ihe onwunwe na-anabata ihe na ogwe aka mepere emepe, dị ka kichin, ime ụlọ, patio n'èzí ma ọ bụ ọnụ ụlọ. Ihe a niile nwere ike họrọ na nnwere onwe zuru oke ma ụda olu na udidi nke ihel. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ekele maka ụdị pigmenti dịgasị iche iche sitere na ndị na-emepụta pigmenti bụ isi, anyị ga-enwe kpọmkwem ihe anyị na-arọ nrọ mgbe nile.
Kedu uru microcement dị
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na mgbanwe dị iche iche banyere ngwa ya na agba ndị anyị nwere ike ịhọrọ bụrịrị ihe mere anyị ga-eji kwado maka ihe a, anyị na-ahụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ kwesịrị ịtụle. Buru n'uche na ọnụahịa nke ngwaahịa a adịghị ọnụ ala ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na nhọrọ ndị ọzọ; Otú ọ dị, n'ịmara na anyị na-echekwa na ndị na-arụ ọrụ ego, o doro anya na ọ bụ otu n'ime ụzọ ndị ọzọ dị ọnụ ala na ahịa. Ma ego abụghị nanị nchegbu anyị n'uche n'oge a mmeghari ohuru, otú Ka anyị hụ ọtụtụ ikike nke microcement.
Nke mbu bu adhesion na-enweghị atụ nke ọ na-enye n'ụdị elu niile, ma kwụ ọtọ ma ọ bụ kehoraizin ma ọ bụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí. Ihe na-adịghị ewe ogologo oge iji rụọ ọrụ, ekele maka ihe eji eme ya ngwa ngwa. N'otu aka ahụ, ọ bara uru ịkọwa nnukwu nguzogide index ya, na-enwe ike iguzogide abrasion, ncha na ihe ọkụkụ Dị ka ihe ole na ole ndị ọzọ. Banyere mmezi ya. microcement dị nnọọ mfe ihicha: naanị mmiri na ncha na-anọpụ iche ka achọrọ. Uru dị iche iche, yana nlekọta gburugburu ebe obibi nke ojiji ya gụnyere, na-agba ọtụtụ mmadụ ume iji ya n'ụlọ ha.
Yabụ, ugbu a ịmara ihe niile microcement nwere ike imere gị, oge eruola ka ịmụ akwụkwọ Kedu ụlọ ahịa kacha mma iji tinye ego na ihe a. N'ezie, ọ bụ mgbanwe maka ụlọ gị nke ga-eme ka ị na-ekpori ndụ kwa ụbọchị ruo n'uju.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Aghụghọ mma » Microcement: ihe a na-achọsi ike na ụwa nke mgbanwe